Ummeli Wezinsizakalo Zasolwandle eDubai UAE | Izinkampani Zomthetho eDubai
Ummeli Wezinsizakalo Zasolwandle eDubai UAE
Umthetho wezasolwandle ngokuyisisekelo ungumnyango wezomthetho, ophathelene nebhizinisi kanye nokuzulazula okubandakanya ukudoba, ukuhambisa, ukuhambisa imikhumbi, kanye nobugebengu emanzini avulekile.
umthetho wasolwandle uzwakalise ukugxeka
ngaso sonke isikhathi sezimo zasolwandle nezokuvuma
Imithetho ekhethekile isebenza ezingozini zasolwandle ezenzeka emanzini noma eduze nalapho
E-UAE, ulwandle luyingxenye ebalulekile yezohwebo nokuhamba kwesizwe. Ibhekana nazo zonke izinhlobo zezindaba zokuthumela e-UAE. Abameli bezolwandle banolwazi nobungcweti emthethweni wasolwandle e-UAE futhi bangakunikeza isisombululo esihle nesilungile ngesinyathelo esisheshayo.
Umthetho Wezwe Lasemanzini
Imigomo yomthetho wasolwandle e-UAE isuselwa eMthethweni Wezwe wasolwandle jikelele. Ngaphezu kwalokho, inendawo efanayo ne-Maritime Law ye-Arabian Gulf Cooperation Council. Umthetho wasolwandle e-UAE uyasebenza e-Emirates of UAE.
Ngaphansi komthetho wezasolwandle e-UAE, ngezansi ezinye zezingqinamba okumele zibizwe:
Izikejana ezinamashadi we-Bareboat
Izimpahla zokuthwala izinkontileka
Ukungcoliswa komhlaba wasolwandle
Izinto zokuhamba nezokuhamba ezithwala izimpahla
Ukuthathwa nokuboshwa kwemikhumbi
Ezezimali nokubhaliswa kwemikhumbi
Ubunikazi nokubhaliswa kwemikhumbi
Ukunikezwa kwamalayisense nokubhaliswa kwezikebhe zokudoba
ukubhaliswa kwemikhumbi yabo e-UAE
Kuneminye iMithetho Yongqongqoshe nemithetho yasendaweni ngaphandle kweMaritime Code uma kukhulunywa ngokuqanjwa, ukubhaliswa kwemikhumbi, kanye nemikhawulo yemisebenzi yomkhumbi obambe ifulegi langaphandle kanye nokuhlukaniswa kwemisebenzi ethekwini ngokuya ngokwesivumelwano setheku. Kukhona futhi kusebenza ku-Emirate ngamunye.
Akunakwenzeka ukubhalisa imikhumbi e-UAE ngaphandle kwamaphesenti ayikhulu ubunikazi benkampani ephethe ubunikazi bamaphesenti angamashumi amahlanu nanye ngabakwa-UAE kuzwelonke noma umuntu oyilungu le-UAE kuzwelonke. Ukubhaliswa ku-UAE kuzokhanselwa uma izikejana zithengiswa futhi kutholwa enye indawo.
Uhulumeni we-UAE akavumeli abanikazi bangaphandle ukuthi bathole ukubhaliswa kwemikhumbi yabo e-UAE. Igcinwa njalo e-UAE ngakho-ke umnikazi womkhumbi kufanele alondoloze ubumi bezizwe ze-UAE.
Ngabameli bezasolwandle e-UAE, ngeke ukwazi ukuphuma enkingeni kuphela, kepha futhi, uzofundiswa ngamalungelo akho nangemithetho.
Kungani Udinga Ummeli Wezezazi Kwimithetho Yezolwandle yase-UAE?
Umthetho wezasolwandle e-UAE uhlelekile njengoba unolunye lwamachweba athambile kunawo wonke. Uma usebenza embonini yezilwandle i-Emirates, uzodinga usizo lwabameli bezasolwandle abanolwazi olunzulu ngezinkinga ezingokomthetho ibhizinisi lakho elibhekene nazo.
Amathimba wezomthetho ochwepheshe abandakanyeka emthethweni wasolwandle e-UAE ahlala phezulu kwezidingo ezivumayo zokulawula kanye nemithetho eyalwe kulo mkhakha. Banekhono futhi elinamandla, okwenza inkampani yabo ihlinzeke abathengi ngezeluleko ezifanele kanye nezinsizakalo zomthetho ezakhelwe ocwaningweni olusha, iminyaka yolwazi olukhethekile, kanye nokusebenza ngokubambisana ngenkuthalo.
Lobu buchule benza abameli bezolwandle banikeze abathengi izinsizakalo ezingokomthetho ezingcono kakhulu kuzo zonke izindaba eziphathelene nokwelulekwa kwezasolwandle ngomshuwalense, ukuthunyelwa kanye nezimali kanye nokufaka isimangalo e-UAE. Ngokuzibophezela ukukusiza ekufinyeleleni izinhloso zakho ebhizinisini lasolwandle kahle, abameli banikezela ngezinsizakalo ezisemthethweni zokuqondisa izinqubo nezivumelwano kanye nezisombululo ezibanzi zamacala nokuxazulula.
Iqembu lobuchwepheshe labameli lihlala lilungele ukuhambisa izeluleko zezomthetho ezifanele kakhulu nezisemthethweni ngomthetho wasolwandle kumakhasimende aphesheya nawasendaweni abandakanyeka embonini ye-Emirates. Ububanzi bokululekwa komthetho wasolwandle e-UAE kufaka phakathi ukubukeka kwezinkinga zomthetho eziqashelwa esigungwini sezomthetho kuleli.
Ukugxila kwabameli abathembekile bezasolwandle ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme ngokunaka ngamunye wamakhasimende abo. Lapho usuya kubameli abanezinkinga ezihlobene nomthetho wolwandle, bazokulalela ngokucophelela ukukhathazeka kwakho. Kuhlanganiswe nocwaningo olunzulu, le nqubo eyingqayizivele yabameli bezasolwandle yenza ukwelulekwa kwamacala abo kube ngokufanelekile futhi endaweni efanele.
Ngokuya ngokuhlinzeka amaklayenti embonini yezolwandle, abameli bezolwandle bangasiza amaklayenti abhekene nalezi zinkinga ezilandelayo:
Ukuhanjiswa okwenziwe ngomhlaba jikelele
Izinto zomshuwalense wokwakha
Izingqinamba zokwakhiwa kwezasolwandle
Ukulwa nokukhokhiswa kwezinkontileka kuwo wonke amabanga ezinkantolo zokwahlulela
Thumela imali kanye nazo zonke izinkinga ezihlobene nezinhlobo ezahlukahlukene zemikhumbi
Singochwepheshe emacaleni emithetho yezasolwandle, kusuka ezimangweni zokungcoliswa kwamanzi ukuya kwezentengiso nezimangalo zenkontileka. Izimpikiswano zasolwandle zifaka isimangalo sokulimala komuntu siqu esifakwe amalungu eqembu labasebenzi kanye nabasebenzi be-dock mayelana nezimo eziyingozi zomkhumbi ngenkathi kulayishwa futhi kulayishwa imikhumbi, isimangalo sengozi yemoto;
Abameli abahamba phambili bezasolwandle e-UAE bayaziqhenya ngokunikeza amabhizinisi embonini yezokuhambisa ukuba bafune ubulungiswa futhi bagcizelele amalungelo abo ngokululeka okuphelele kwezomthetho nezinsizakalo.
Abameli abanolwazi lwasolwandle abanokuqonda okuphelele kwemboni yezolwandle kungakusiza ukuthi unikeze izixazululo zomthetho zokuxazulula zonke izingxabano zakho zasolwandle. Abameli laba baphinde babe nekhono uma kuziwa ekubhaleni zonke izinhlobo zezinkontileka zasolwandle ezisuselwa emthethweni wenkontileka yasolwandle.
Bhekana Nezinkinga Zakho Zomthetho ZaseMartha ngesibindi futhi ushayele Abameli Abahamba Phambili baseMartha e-UAE!
Kuyiqiniso elaziwayo cishe kuwo wonke umuntu ukuthi i-UAE ingumbukiso wezasolwandle obalulekile eMiddle East, owawubandakanya cishe amaphesenti angama-90 wokuthengiselana kwezentengiso yezomhlaba jikelele kwezokuhamba zasolwandle nokuhweba.
Abameli bezasolwandle bayazi ukuthi amakhasimende abo adinga abanye ochwepheshe bezomthetho abahamba phambili nabanolwazi abanganikeza izinsizakalo zezomthetho ezinhle kakhulu ezihlobene nemashi.
Abameli abahamba phambili beMaritime e-UAE bangakusiza ekuphrintweni okuhle kwesivumelwano ukuze konke kucace kuwe. Bayazi nokuthi bangakanani ukwesekelwa okungafunwa ngabathengi bamanye amazwe nabasekhaya mayelana nezindaba eziphathelene nolwandle.
Iqembu labameli bezasolwandle abanolwazi futhi abafanelekile basebenzisa usizo lwenethiwekhi yezindawo zokuprakthiza nezingcweti zomkhakha ukukunikeza izeluleko ezingcono kakhulu zezomthetho, izinsizakalo, kanye nokumelwa okungenzeka.
Kungakhathalekile ukuthi ngabe iliphi icala lakho lasolwandle noma ukukhathazeka kwakho, ungathembela futhi uthembele emandleni amakhono abameli bezomthetho abahle kakhulu maqondana nokuhlinzeka ngezinsizakalo zomthetho kukho konke okuhlobene nomthetho wasolwandle. Uma unezinye izinkathazo ngezinkinga zakho zomthetho, unganqikazi ukucela izeluleko noma ukubonisana nabameli bezolwandle. Abanye balaba mmeli bangochwepheshe nakweminye imikhakha yezimboni.
Uma udinga usizo ngomthetho wasolwandle e-UAE, vele uxhumane nommeli ongcono kakhulu futhi uthole ukubonisana nezinye izinsiza zomthetho ozidingayo ngecala lakho!
hlela ukubonisana kokuqala nommeli wethu wezasolwandle aphesheya
Sizimisele ukusebenza ngqo nawe ukuze siqonde izingqinamba zakho ezihlukile